Kenya oo shaacisay Magacyada dadka weeraray hotelka Nairobi | Wardoon
Home Somali News Kenya oo shaacisay Magacyada dadka weeraray hotelka Nairobi
Kenya oo shaacisay Magacyada dadka weeraray hotelka Nairobi
Dowladda Kenya ayaa shaacisay inay heshay magacyada dadkii weeraray hotelka Dusit ee magaalada Nairobi, kaasi oo Al Shabaab ay sheegteen masuuliyadiisa.
Laamaha amaanka ee dalka Kenya ayaa sheegay inay heleen qaar kamid ah ragga weerarka geystay Baasabooradooda, islamarkaana halkaasi ay ka ogaadeen magacyada dadka weerarka geystay.
Laamaha amaanka ayaa sheegay inay baaritaanka marka uu dhamaado kadib ay soo bandhigi doonaan dadka weerarka geystay magacyadooda iyo halka ay wadanka Kenya ka galeen,sida warbixinta ay ku sheegeen.
Laakiin waxay sheegeen inay ogaadeen magacyada labo kamid ah dadka weerarka geystay waxaana la sheegay in midka koowaad magaciisa uu yahay Eric Kinyanjui oo 26 jir ah oo ka yimid deegaanka Ngecha ee Limuru, halka midka kalena magaciisa lagu sheegay Faaruuq oo ku dhashay Xaafada isku raranka ah ee Majengo ee magaalada Nairobi.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhurru Kenyatta ayaa shalay sheegay inay qaban doonaan cid walbaa oo raad ku yeelata weerarkii ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isaga oo sheegay inay doonayaan inay amaan ku wada noolaadaan.
“Cid kastaa oo taageertay, dhaqaalo ku taageertay, soo dhaweysay waa la qaban doonaa, mana la aqbalayo inay nagu dhex dhuuntaan”ayuu yiri Kenyatta oo ka hadlayay weerarkii ka dhacay xaafadda Westland.
Previous articleDAAWO:-Fanaanada Rihanna oo aabaheed Maxkamad soo taagtay
Next articleDAAWO:-Qatar oo 68 gaadiidka gaashaaman ugu deeqday Ciidamada Milateriga Soomaaliya
XOG;- Koxda Ahlusuna Oo Abaabul dagaal ka wadda Gobolada Dhexe
Axmed Madoobe oo aqbalay sharuudihii AMISOM